Kedu mgbe ndị mmadụ na-edebanye aha maka Webinars? | Martech Zone
Kedu mgbe ndị mmadụ na-edebanye aha maka Webinars?
Friday, May 31, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nnukwu folks na ON24, Webcasting, Virtual Event na Webinar solutions eweta, enyela ụfọdụ nghọta dị ukwuu na ụlọ ọrụ ọ bụla na-eme webinars. Anyị hụrụ webinars ebe a Martech Zone anyị na ndị anyị na ha na-emekọ ihe ọnụ ịkwalite na ime ha.
Ndị a bụ ndụmọdụ 4 maka imeziwanye webinars gị
Ndị bịara Webcast na-eyigharị oge. 64% debanye aha izu nke webinar dị ndụ. Na ndị na-emepụta webcast kwesịrị ịme “ọgbụgba ụbọchị omume” mgbe niile iji nweta ndị na-edebanye aha oge ikpeazụ, dị ka 21% debanye aha na webinar.
TGIF! Zipu ozi-e nkwado na Tuesday, ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-edebanye aha na Tuesday karịa ụbọchị ọ bụla - na ihe karịrị okpukpu abụọ karịa na Fraịde.
Chee echiche dị n'ụsọ oké osimiri. Ọtụtụ ON24 webinars na-amalite na elekere 11 nke ụtụtụ Pacific Time, mgbe ọ dị mma maka mpaghara abụọ ahụ, si otú a na-abawanye ndebanye aha na ndị bịara.
Oge obula. -Chọ ihe ndị na-eto eto na-eto eto. ON24 benchmark data na-egosi na nkezi nke 25% nke ndị debanyere aha maka webinar tupu ụbọchị dị ndụ lere ụdị mbipụta nke ihe omume ahụ.
Kedu mgbe ndị mmadụ na-edebanye aha maka Webinar gị?
Nke a bụ ụfọdụ ngwa ngwa na Webinar Registrations… pịa ebe a iji budata Webinar Benchmark Report niile.
Tags: infographicWebinar Ahịandebanyendebanye webinar